Nagu saabsan - Ningbo Pntek Technology Co., Ltd.
Waxaan ku sugnaa magaalada Ningbo, gobolka Zhejiang. Waxaan nahay alaab-qeybiye xirfadle ah dhuumaha balaastigga ah, fiilooyin iyo filtarka oo leh khibrad dhoofinta sannado badan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkaduhu yihiin: UPVC, CPVC, PPR, HDPE biibiile iyo rakiban, filtarka, nidaamka saydiya iyo mitirka biyaha kuwaas oo dhammaantood si fiican u soo saaray mashiinno gaar ah oo casri ah iyo qalab tayo wanaagsan leh oo si ballaaran loogu isticmaalay waraabka beeraha iyo dhismaha.
U adeegso sayniska si aad uga faa'iideysato aadanaha, u isticmaal tikniyoolajiyad nolosha
Shaqaalaha Ningbo Pntek waxay u adeegsan doonaan raasamaal ahaan isku xirka, sayniska iyo tikniyoolajiyadda sida taageerada, iyo suuqa sida xamuulka, si ay u ciyaaraan doorka faa iidada baaxada leh iyo xarunta R&D ee ku saleysan qadka warshadaha dhuumaha balaastigga ah, hirgelinta istiraatiijiyadda caanka ah ee caanka ah, istaraatijiyad ballaadhin iyo istiraatiijiyad horumarineed. Istaraatiijiyadda horumarinta wax soo saarka cusub ee "sare, cusub oo fiiqan" waxay ka dhigeysaa badeecooyinka kala duwanaansho.
Tan iyo aasaaskii shirkadda oo markasta ku dadaal sida ugu wanaagsan ee aan ku qancin karno baahiyaha macaamiisheena.
Tallaabo kasta oo ka mid ah geeddi-socodka wax soo saarkeennu wuxuu waafaqsan yahay heerka caalamiga ah ee ISO9001: 2000.
Shirkaddayadu waxay si daacad ah u dooneysaa inay la shaqeyso shirkadaha adduunka oo idil si loo gaaro guul-guul-guul.
Ningbo Pntek wuxuu mudnaan siinayaa tayada iyo macaamiisheenna wuxuuna ka helay qadarin gudaha iyo dibaddaba.
Waxaan u qaadanaa ragga aasaaska oo waxaan soo ururineynaa koox shaqaale ah oo muhiim ah kuwaas oo si fiican loo tababaray oo ku hawlan maaraynta ganacsiga casriga ah, horumarinta wax soo saarka, xakamaynta tayada iyo tiknoolajiyada wax soo saarka.
Hadafkeenu waa inaan kasbano macaamiisheenna daacadnimo iyo inaan ku celcelino ganacsi adoo Ku siinaya alaabada ugu tayada sareysa sicirka tartanka Joogtaynta heerka ugu sarreeya ee suurtogalka ah ee adeegga macaamiisha.
Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa Koonfur Afrika, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Aasiya, Koonfurta Aasiya, Bartamaha Aasiya, Ruushka, Koonfurta Ameerika, Waqooyiga Afrika, Afrika Dhexe iyo gobollada iyo gobollada kale.